Ciidamo qabsaday deegaano ka tirsan Bay - BBC News Somali
Ciidamo qabsaday deegaano ka tirsan Bay
7 Abriil 2012
Wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in kadib markii ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda ku meelgaarka ah ay shalay qabsadeen degmada Qansax-Dheere ee gobolka Bay ay hadda ciidamadaas ku sugan yihiin duleedka degmada Ufurow.
Xaaladda Ufurow, ayaa hadda ah mid kacsan, iyadoo ciidamada dalka Ethiopia, oo ay la socdaan kooxo hubaysan oo Soomaali ah, ayaa hadda ku sugan wax ka yar 10km meel u jirta Ufurow.
Al-Shabaab ayaa wararku sheegayaan in wali ay ku sugan yihiin koontaroolka Ufurow.
Waxaa dadka deegaanku cabsi ka qabaan in ciidamadu ku dagaalamaan gudaha magaalada, inkastoo al-Shabaab dib uga guranaysay maalmihii ugu dambeeyay goobaha ay ciidamada Ethiopia duulaanka ku soo qaadaan.
Degmada Qansax-Dheere, ayaa afhayeen u hadlay al-Shabab uu sheegay in ay xeelad dagaal uga baxeen kadib markii si ciidamada Ethiopia iyo ciidan Soomaali ah oo la socda ay weerareen. Shalay galinkii dambe.